अपहरण « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
नाइजेरियामा २७ विद्यार्थीसहित ४२ जना अपहरणमुक्त, अझै ३ सय ३७ जनाको अवस्था अज्ञात
एजेन्सी । नाइजेरियामा शनिबार अपहरणमा परेका मध्ये २७ विद्यार्थीसहित ४२ जनालाई अपहरणमुक्त गरिएको छ । नाइजर प्रान्तका गभर्नर अबु–बकर सानी बेलोका अनुसार दश दिन अघि अपहरणमा परेका मध्ये ४२ जनालाई
छोरा अपहरण गरि फिरौती माग्ने बाबु पक्राउ, अपहरित बालकको सकुशल उद्धार
काठमाडौं । धनुषाको नगराइनमा आफ्नै छोरालाई अपहरण गरेर फिरौती मागेको आरोपमा बाबुसहित ६ जनालाई पक्राउ परेका छन् । अपहरण गरेको आरोपमा प्रहरीले बालकका बाबु रमेश साह, उनका मामा र उपहरण
काठमाडौं, पुस ३ । उत्तरी नाइजेरियामा गत शुक्रबार विद्रोहीको अपहरणमा परेका बालकहरु अपहरणमुक्त भएका छन् । नाइजेरियामा संघर्षरत बोकोहरामले एक साताअघि एक विद्यालयबाट ती बालकहरु अपहरण गरेका थिए । काट्सिना
अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एक महिलालाई मृत्युदण्ड
काठमाडौं, कात्तिक २ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ । लिसा मन्टगमरीले सन् २००४ मा मिसोरीमा एकजना गर्भवती
काठमाडौं । लिबियामा सात भारतीय नागरिक अपहरणमा परेका छन् । लिबियाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा कार्यरत ती भारतीय नागरिकहरुलाई भारत फर्कने क्रममा विमानस्थल जाँदै गर्दा लिबियाको अस्वेरिफबाट अपहरण गरिएको हो ।
बागलुङ । विद्यालय हिँडेकी बालिका अपहरण गर्ने दुई जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले पक्राउ गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिका–६ की एक बालिकालाई गत मङ्गलबार जबरजस्ती मोटरसाइकलमा राखी अपहरण गरेको आरोपमा
मलेसियामा आफ्नै रेष्टुरेन्टका कर्मचारीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाउने ‘डेबिड’काठमाडौंमा पक्राउ
काठमाडौं । मलेसियामा नेपालीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मोरङ सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका डेबिड भनिने दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौंमा पक्राउ परेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले
बन्धक बनाई फिरौती माग्ने तीनजना पक्राउ
काभे, भदौ २६ । काभ्रेमा व्यक्ति अपहरण तथा शरीर बन्दक बनाई फिरौती रकम माग्ने तीनजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पाँचखाल नगरपालिका– १२ तीनघरेका आकाश परियार, तेमाल गाउँपालिका– ७
सिन्धुली, भदौ १३ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले शनिबार नेक्रविक्रम चन्द समूहका एक महिला कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको
के दाहाललाई अपहरण शैलीमै पुर्‍याइएको थियो शितलनिवास ? दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति परिबन्दमा !
काठमाडौं, साउन ५ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक सत्ता संघर्षको ताण्डवमा हिजोआज राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विपक्षमा पार्टीका शीर्ष नेताहरु